बाँकेमा एक चिकित्सकसहित ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि – BANKE POST
Posted on August 25, 2020 August 25, 2020 Author Hari Adhikari	Comment(0)
बाँकेमा एक चिकित्सकसहित ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालका फिजिसियन डा. राजन पाण्डेसहित नौ जनामा संक्रमण देखिएको हो । यसअघि हिजो सोही अस्पतालका अर्का फिजिसियन डा. संकेत रिसालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । भेरी अस्पतालमा आज गरिएको पिसिआर परीक्षणमा एभरेष्ट बैंकका २ जना, वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जका एक, नेपालगञ्जको वडा नम्बर ४ का ३, वडा नम्बर १ र ९ का एक÷एक जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । भेरीमै गरिएको परीक्षणमा बर्दियाका ६ जनामा पनि कोरोना देखिएको छ । ठाकुरबाबा नगरपालिकाका ४ जना तथा बढैयाताल गाउँपालिका र राजापुर नगरपालिकाका एक÷एक जनामा कोरोना पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ । बाँकेमा आज २६ जना कोरोना संक्रमित निको भएर डिष्चार्ज भएका छन् । होटल सिटी प्यालेस आइसोलेसन नेपालगञ्जबाट २१ जना र खुल्ला कारागार आइसोलेसन गनापुरबाट ५ जना कोरोना संक्रमित निको भएर डिष्चार्ज भएको कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । यो संगै बाँकेका कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या ६ सय ५४ पुगेको छ ।
मंसिर१५-नेपालगंज कोरोना भाइरस संक्रमणबाट देशैभर थप २९ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै देशभर कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ५ सय ८ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थप २९ जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका हुन् । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४ सय ७४ जना […]
मंसिर१५-नेपालगंज बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण हुने भएको छ । खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नती गर्दै १५ शैया अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको हो । संघीय सरकारको बजेट मार्फत निर्माण हुने खजुरा अस्पतालको बाँके क्षेत्र नं. ३ का सांसद नन्दलाल रोकायले सोमबार एक समारोहका वीच शिलान्यास गर्नुभयो । […]
Posted on November 29, 2020 November 29, 2020 Author Hari Adhikari
मंसिर१४-नेपालगंज बाँकेमा पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा लागूपदार्थको कारोबार र ओसारपसार डर लाग्दो रूपमा देखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार लागूऔषध नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लागू औषधको सेवन र ओसारपसार नियन्त्रणमा सक्रियता देखाए पनि खुला सीमाका कारण यसको सेवन र ओसारपसार रोकिएको छैन । पछिल्लो तीन वर्षमा लागूऔषध सम्बन्धी ५८४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् […]